Oovimba be-XMR-Funda ukuRhweba
Iirekhodi zikaMonero zoTshintsho lwemihla ngemihla ngeBhloko ePhakamileyo njengeBullish Momentum Returns
Ukuhlaziywa: 23 Julayi 2021
I-Monero (i-XMR) kutsha nje ibone irekhodi le-57.9 yeentengiselwano zemihla ngemihla kwibloko nganye, ngokwengxelo eyenziwe ngumhloli wamazwe i-Monero Blocks XMR.
Kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, ibhlokhi ye-cryptocurrency ibhale ngaphezulu kwe-40,000 yokuthengiselana, edlula kwi-25% yevolthi yokuthengiselana ngeveki.
Okwangoku, izibini zokurhweba zeXMR zikwafumana ukwanda kwexabiso lokuthengisa kwiitshathi. Uninzi lwee-altcoins zirekhode iipikhi ezibalulekileyo ukusukela oko kwaphuma okuhle kwi-Bitcoin, nge-XLM inyuka malunga ne-13% ukusukela oko kubuyisiwe.
Nangona kunjalo, uMonero akaphumelelanga ukuseka unyawo olusempilweni ngaphezulu kwenani leedola ezingama-200 kwaye uhlala enyanzelekile kuluhlu oluphakathi kwe- $ 200 kunye ne- $ 195.
Imakethi ye-crypto ngokubanzi ibone ukuphazamiseka okukhulu kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, ukuqala ngoMeyi. Kwinyanga enye, uMonero wabhala elona xabiso lakhe liphezulu kuwo onke ama- $ 517 ngengqekembe nganye.
Abanye abahlalutyi bobuchwephesha bacebisa ukuba iXMR ihlale iqinile kwinkxaso ebalulekileyo ethe yavavanywa amatyeli amahlanu kwiinyanga ezintlanu ezidlulileyo, ukusukela ngoFebruwari ukuya kuJulayi.
Oko kwathiwa, uthungelwano lurekhode iirges ezininzi zokurhweba ezihambelana nomndilili wentengiselwano ngevolumu yebhloko. Intengiselwano yansuku zonke yangaphambili yenzekile ngoMeyi, ehambelana ne-45% yokungazinzi kwesibini sokurhweba seXMR / USD.
Amanqanaba aphambili eMonero okuBukela-nge-23 kaJulayi
UMonero uthumele isaphulelo esisempilweni ukusuka kwinqanaba leedola ezili-180.00 ngoLwesithathu, ukutyhala ixabiso ukuya kwi- $ 200.00 ephezulu. Nangona kunjalo, le ntshukumo inyusayo yaneliseka ziibhere, ezatyhala ixabiso laya kuthi ga kwi-196.00 yeedola emva kokudityaniswa kwexesha elide izolo.
Oko kwathethi, iXMR iphinde yaliphinda inqanaba lama- $ 200.00 kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo yaza yalahlwa kwakhona, ishiya ibotshelelwe phakathi kwe- $ 200 kunye ne- $ 195. Inkxaso ye- $ 195.00 iqinisiwe yi-50 SMA kwitshathi yethu yeeyure ezi-4, isenza isikhuthazo sokunyusa kwiiyure ezizayo ikhosi elandelayo enokwenzeka.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 200.00, i- $ 210.00, kunye ne- $ 220.00, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 195.00, $ 180.00, kunye ne- $ 175.00.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.33 zezigidi
Imali eyimali yentengiso yaseMonero: $ 3.53 billion
Monero ubukhosi: 0.26%
Inqanaba lentengiso: #27
tags Cryptocurrency, Monero, Uhlalutyo lobuGcisa, XMR
Ixabiso leMeroero (XMR) liphuma ngexabiso lama- $ 244, kujoliswe kwi- $ 281
Uhlalutyo lwamaxabiso eMonero (XMR): Epreli 04
Ukuba iinkunzi zeenkomo ziyaqhubeka nokwandisa amandla azo, inqanaba lokumelana ne-281 leedola liya kungena, kwaye iMonero izonyuka iye kuthi ga kumanqanaba angama-322 kunye nama-361 eedola. Ukusilela ukophula inqanaba lama-281 eedola kungathumela ixabiso ukuya kuthi ga kwi-244, $ 217 nakwiidola ezili-184.
Amanqanaba enkxaso: $ 244, $ 217, $ 184
IXMRUSD inyusa itshathi yemihla ngemihla. Ixabiso laliphakathi kwenqanaba lenkxaso kwi- $ 217 kunye nenqanaba lokumelana ne- $ 244 kwiveki ephelileyo. Iinkunzi ekugqibeleni zanqoba ngokunyusa ixabiso ukunyusa inqanaba lokumelana ne- $ 244. Ingqekembe yeMonero isiya kwinqanaba lokumelana ne- $ 281 ngexesha lokubhalwa kwale ngxelo.
Itshathi yemihla ngemihla yeXMRUSD, Epreli 04
I-EMA yeentsuku ezili-9 yahlulwe kakuhle kwi-EMA yeentsuku ezingama-21 kwitshathi yemihla ngemihla ngentengo yamaxabiso ngaphezulu kwee-EMA ezimbini. Ukuba iinkunzi zeenkomo ziyaqhubeka nokwandisa amandla azo, inqanaba lokumelana ne- $ 281 liya kungena, kwaye iMonero izonyuka iye kuma- $ 322 kunye nama- $ 361 amanqanaba. Ukusilela ukophula inqanaba lama-281 eedola kungathumela ixabiso ukuya kuthi ga kwi-244, $ 217 nakwiidola ezili-184. Okwangoku, ixesha lesalathiso samandla esi-14 sikumanqanaba angama-70 kunye nomgca wesiginali olatha phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, uMonero ukwintshukumo yokuqhubela phambili. Iinkunzi ziye zafumana uxinzelelo ngakumbi kwaye zatyhala ixabiso ngaphandle kwendlela yokudibanisa bekuyiveki ephelileyo. Ikhandlela elomeleleyo le-bullish elenza amakhandlela angaphambili. Ixabiso liyenyuka kwaye yayijolise kwinqanaba lokumelana ne- $ 281 ngaphambili ngalo mzuzu.
Itshathi yeeyure ezi-4 zeXMRUSD, Epreli 04
Ixabiso lithengisa ngaphezulu kwee-EMA ezimbini kunye ne-EMA yeentsuku ezili-9 ngaphezulu kwe-EMA yeentsuku ezingama-21 kwaye ezi zimbini ziyahlukana omnye nomnye ezibonisa ukwanda kwamandla eenkomo kunye nokuthenga umqondiso.
tags Marketing, Uhlalutyo Technical, XMR
I-Monero (XMR) ibuyisa kwakhona kwi-Downtrend, idibanisa ngaphezulu kwe-76 yeedola yenkxaso
Ukuhlaziywa: 24 Februwari 2020
Iindawo eziManyeneyo eziPhambili: $ 60, $ 70, $ 80
Iindawo eziNkxaso eziPhambili: $ 40, i-$ 30, i-$ 20
I-XMR / USD yexesha elide: Ukunyusa
UMonero ebekubaleka okumangalisayo emva kokophula umgca we-downtrend. Iinkunzi ziye zafikelela kwixabiso eliphakamileyo leedola ezingama-96 kodwa zangakwazi ukwahlula ngaphezulu. Kuphezulu kwe- $ 96, i-XMR ifikelela kwingingqi ethengwe ngaphezulu.
Ukuhambela phezulu kuye kwathinteleka kuba ukuthengwa kwenziwe ngaphezulu. Kwingingqi ethengwe ngaphezulu, abathengisi bavela ukuba batyhalele phantsi uMonero. Abathengi abekho ukutyhala ingqekembe phezulu. Ingqekembe yawa kwaye yafumana inkxaso kwi-76 yeedola. I-Monero idibanisa ngaphezulu kwenkxaso yangoku ye- $ 76.
I-XMR / USD-Itshathi yemihla ngemihla
Njengokuba uMonero ewile kwingingqi ethengiweyo, isiQinisekiso saMandla esiNxulumene siwele kwinqanaba lama-56. IMonero isengaphezulu komgangatho osembindini wama-50. IXMR kungenzeka inyuke njengoko ingaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 ukuthambeka phezulu kubonisa intshukumo ephezulu.
IXMR / USD yeXesha eliPhakathi: Ukuqengqeleka
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso lihamba ngendlela esecaleni. Iinkunzi bezisoloko zifuna ukonyuka ngaphezulu koxinzelelo oluphezulu kwi- $ 96. Iinkunzi zona ziyagxothwa ngalo lonke ixesha zizama ukungavumi. Kwilinge lesibini elingaphumelelanga, ingqekembe yehla kwinkxaso yeedola ezingama-76.
I-XMR / USD-4 Itshathi yeYure
I-Monero ngoku ithengisa ngaphantsi kwe-75% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Kwindlela yexesha elifutshane, ingqekembe ikwi-bearish umfutho. Intengiso inokufikelela kwinkxaso ye- $ 76. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni.
Imbonakalo gabalala yeMonero (XMR)
I-Monero iluphelisile uxinzelelo lwayo lokuthengisa njengoko imarike idibanisa ngaphezulu kwe- $ 76. Kwicala elingaphezulu, iinkunzi zeenkomo kufuneka zityhale ixabiso kwisiteshi esinyukayo ukuze ingqekembe iphinde iqhubeke nokunyuka kwayo. Okwangoku, ixabiso alikho ngaphezulu kwee-EMA, njengoko ukunyuka okuphezulu kungathandabuzeki.
Isixhobo: XMR / USD
Ixabiso lokungena: $ 77
Yeka: $ 60
Ithagethi: $ 110
tags Monero, Uhlalutyo lwamaxabiso, XMR, XMRUSD
I-Monero (XMR) iyaqhubeka nokulahla, ngaba iiBulls zingalikhusela ixabiso kwi $ 60?
Ukuhlaziywa: 20 Februwari 2020
I-XMR / i-USD yexesha elide iTrage: Bullish
Nge-15 kaFebruwari, iinkunzi zeenkomo zafikelela kuma-96 eedola aphezulu. Ukunyuka okuphezulu kuye kwathinteleka ngenxa yokuba ingqekembe ifikelele kwingingqi ethe kratya yentengiso. I-XMR ayinakonyuka kwingingqi ethengwe ngaphezulu ngenxa yokungafumaneki kwabathengi ukutyhala ingqekembe phezulu. Kuloo mmandla, abathengisi bavela ukuba batyhalele uMonero ezantsi. Iinkunzi zeenkomo zachaswa kwaye ingqekembe yehla yaya kuthi ga kwi-77.50 yeedola.
Ixabiso lehla kwinkxaso yenqanaba lembali. Imakethi yayidityanisiwe ngeli xesha ngoSeptemba 2019. Nangona kunjalo, ukuba inkxaso iyabamba, ingqekembe iya kunyanzeliswa kuhambo olubophelelayo. Kwicala elisezantsi, ukuba inkxaso iyaqhekeka, ingqekembe iya kuqhubeka ukwehla iye kuthi xhaxhe nge-68 yeedola.
I-Monero iwele ngaphantsi kwe-50% ye-stochastic yemihla ngemihla. Oku kuthetha ukuba iXMR ikwimeko ye-bearish. Ngaphambili, iMonero yayingaphezulu kwe-94% yoluhlu lwemihla ngemihla. Ingqekembe yayisomelele ngamandla ngelo xesha. Nangona kunjalo, amaxabiso aphula ijelo elisezantsi lesitishi esinyukayo esibonisa ukuba ezantsi ziyaqhubeka.
I-XMR / USD ukukhetha ixesha eliphakathi: Ukukhupha
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iinkunzi zeenkomo zazizama ukophula ukuxhathisa ngaphezulu kwe- $ 96. Kwilinge lokuqala, iinkunzi zeenkomo zazingavunyelwanga njengoko ixabiso laye laya ezantsi kwi- $ 90. Kwilinge lesibini, iinkunzi zeenkomo zazingavunyelwa kwaye ezantsi ziye zaqhubeka zaya kutsho kuma-76 eedola.
Okwangoku, uMonero uwele kwinqanaba lama-33 le-Index yamandla ahlobene. Le ngqekembe ikummandla wedowndrend. Kwangelo xesha, ingaphantsi komgangatho osembindini we-50. Ngaphandle koko, njengoko ixabiso lisaphula umgca wendlela yokuqhubela phambili, imeko yangaphambili iphelisiwe.
I-Monero inokwenzeka ukuba iqhubeke nentshukumo esezantsi. Iibhere ziphumelele ekwaphuleni ngaphantsi komgangatho wendlela yokunyusa kunye nomgca wenkxaso wejelo elinyukayo. Oku kubonisa ukuba ukuthengisa uxinzelelo kuyaqhubeka. Okwangoku, ingqekembe yemali isondela kwingingqi ethe kratya kwi-stochastic yemihla ngemihla kunye ne-RSI,
Umqondiso weXMR woRhwebo
Ixabiso lokungena: $ 76
Yeka: $ 85
Ithagethi: $ 60
tags Monero, Uhlalutyo lwamaxabiso, XMR, XMR / USD
I-Monero (i-XMR) ijika isuka kwi-Resistance eyi- $ 96, inokuthi inyukele phezulu
Ukuhlaziywa: 17 Februwari 2020
Indawo engundoqo yenkxasos: $ 40, $ 30, $ 20
I-Monero ifikelele kwixabiso eliphezulu le-96 yeedola emva kwesaphulelo esivela kwi- $ 60 ephantsi. Iinkunzi bezingenakukugcina ukunyuka okunyuka njengoko amaxabiso ayengachazwanga kwaye kwahamba ezantsi. Kwinqanaba lamaxabiso angama-96 eedola, iinkunzi zeenkomo zenze iinzame ezimbini zokuchasa ngaphandle kokophula. Iinkunzi zeenkomo zazingavunyelwanga kwaye ixabiso lawela ezantsi kwi- $ 83. Kubonakala ngathi inkxaso yangoku inokubanjwa.
Ixabiso lihamba ezantsi xa liphula umgca wokuxhasa ishaneli enyukayo iMonero izokwehla iye kuthi ga kwi-60 yeedola. Okwangoku, i-Relative Strength Index ixesha le-14 kwinqanaba lama-62 libonisa ukuba i-XMR isekwindawo ye-uptrend. Ingqekembe inexabiso lokunyuka.
I-XMR / USD phakathi kwexesha eliphakathi: Ukuphelisa
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini sikwi-uptrend egudileyo. Ingqekembe yawela ezantsi kwiidola ezingama-80 kwaye yaqhubeka nokudityaniswa kwayo. Intshukumo yexabiso lenze i-bearish ngaphezulu kabini ngaphambi kokuhla. Njengamaxabiso owaphula umgca wokuhamba inyathelo eliya phezulu kufuneka lipheliswe.
I-Monero ingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Kuthetha ukuba ingqekembe ikwi-bullish umfutho. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika phezulu zibonisa uptrend.
I-Monero ikwimo yokuqhubela phambili. Ukuhamba ezantsi kwaba sisiphumo semeko egqithisileyo yemali. Abathengisi baveliswa ngexesha lokuthenga ngaphezulu ukutyhala iXMR ezantsi. Ukuba inkxaso ibambe iinkunzi zenkomo ziya kuphinda ziphinde zixhathise ukuxhathisa.
Ixabiso lokungena: $ 82
Yeka: $ 80
I-Monero (i-XMR) ikwi-Uptrend Move, ilwa neNkcaso kwi-96 yeedola
Ukuhlaziywa: 13 Februwari 2020
Iindawo eziKhuselekileyo: $ 60, i-$ 70, i-$ 80
Imimandla yenkxaso ephambili: $ 40, $ 30, $ 20
UMonero kukunyukela phezulu emva kokophula umgca we-downtrend ukusukela nge-2 kaJanuwari. Inqanaba lentengo laphulwe emva kweveki yokudityaniswa okungaphantsi kweedola ezingama-60. Njengoko ingqekembe inyuka, ijongene nolunye uxhathiso kwi- $ 60. Emva kwemizamo emibini engaphumelelanga yokumelana, iXMR yawela kwinqanaba lokuxhasa i-70 yeedola.
Nangona kunjalo, kwinkxaso yeedola ezingama-60, uMonero wabuya kwakhona kwaye wafikelela kwinqanaba eliphezulu lama-96 eedola. I-Monero inesithintelo esinye sokutsiba ngaphezulu ukuze ibe ngaphandle kwe-downtrend zone. Kwicala elingasentla, ukuba amaxabiso ayaphula ukuxhathisa kwe- $ 96, iXMR iya kuthi rally ngaphezulu kwe- $ 110. Kwicala elisezantsi, ukuba ingqekembe iye yagxothwa, iXMR iya kuwela ezantsi kwi- $ 88 kwaye iphinde iqhubeke nokunyukela phezulu.
I-Monero ithengisa ngaphezulu kwe-94% ye-stochastic yemihla ngemihla. I-XMR ikwisantya esomeleleyo sokukhula kwaye ikummandla othengwe ngaphezulu. Kwingingqi ethengiweyo, ingqekembe iya kujongana noxinzelelo lokuthengisa. Kummandla, abathengisi bangena ukutyhala amaxabiso ezantsi. Abathengi abafumaneki ukutyhala iXMR phezulu kwingingqi ethengiweyo. Kwisiteshi esinyukayo, uMonero uya kuqhubeka nokunyuka kwakhe ukuba nje ixabiso lihlala ngaphakathi kwitshaneli. Nangona kunjalo, ukuba amaxabiso aphula ngaphantsi komgaqo wokuhamba osezantsi, uxinzelelo lokuthengisa luya kuphinda luqhubeke.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iMonero ikwindawo egudileyo. Ingqekembe yenza ukuphakama okuphezulu kunye nokunyuka okuphezulu. Ingqekembe yaphikiswa kwinqanaba lamaxabiso angama- $ 88. Nangona kunjalo, ukuphinda uzame ukuxhathisa kunika imali kwingqekembe. I-XMR ngoku ijongene nolunye uxhathiso kwi- $ 96.
Ixesha lamaXabiso aMandla aHlangeneyo kwinqanaba le-14 kwinqanaba lama-60 libonisa ukuba iXMR ikummandla ophakamileyo. I-XMR inokwenzeka ukuba iphinde inyuke kwakhona. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika phezulu zibonisa uptrend.
I-Monero ikwimo yokuqhubela phambili. Esi sibini sinokunye ukunganyaniseki okukhulu ukoyisa ngaphambi kokudibana. Kubonakala inkxaso kwi-90 yeedola ibambe. Isaphulelo kwi-90 yenkxaso iya kutyhala ingqekembe ngaphezulu kwe-96 yeedola. Emva koko i-XRP iya kuphuma kummandla we-downtrend.
Ixabiso lokungena: $ 91
I-Monero (XMR) inyuka ephezulu emva kokuqhekeka kwiNkxaso
Ukuhlaziywa: 13 January 2020
Ngomhla kaJanuwari 3, uMonero wayekuhambo oluphezulu. Iinkunzi zeenkomo zaphula umgca we-downtrend kwaye zafikelela kuma-60 eedola aphezulu. Ingqekembe yehlulekile ukungena ekuchaseni kwi-60 yeedola. Ngenxa yoko, iXMR yanyanzelwa ukuba ihambe ecaleni kwecala lokuchasana. Namhlanje, iinkunzi zeenkomo ziye zachaswa njengoko ingqekembe yehla yaya ezantsi kwi- $ 54. Kwicala elisezantsi, ukuba inkxaso kwi-54 yeentanda, uxinzelelo lokuthengisa luza kuphinda luye kwi-50 ye- $ Okwangoku, ukuba inkxaso ye-54 yeedola ibanjiwe, uMonero uya kuphakama ukuze abuyisele ukunganyangeki kwe- $ 60.
UMonero wawa ngenxa yokuba ixabiso lafikelela kummandla othengiweyo wentengiso. Ixabiso okwangoku lingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla ebonisa ukuba ixabiso likwi-bearish umfutho. Umndilili wokuhamba ukwinqanaba le-bullish crossover. Intsingiselo yexabiso lokwaphula umgca we-downtrend ukuya kwinqanaba eliphezulu kukuba imeko ye-bearish iphelisiwe.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ingqekembe ibisoloko isemacaleni ukusukela ngoDisemba 17. Ixabiso lanyuka ngaphakathi kuluhlu lwamaxabiso kude kube nguJanuwari 3 xa kuhla ixabiso. Ingqekembe yafikelela kwi-64 yeedola ephezulu kwaye yachaswa. Ukuhamba ezantsi kuqhubekile njengoko ixabiso kulindeleke ukuba lifikelele kwizantsi le- $ 54.
Ixesha eli-14 lamandla angama-43 libonisa ukuba ingqekembe ikwindawo eboshwe kwinqanaba. Imivalo yamaxabiso ingaphantsi kweentsuku ezingama-21 ze-SMA kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA ezibonisa ukuba ixabiso liyehla. Njengoko ukuwa kweemarike, abathengi banokuvela kwinqanaba lamaxabiso angama- $ 54.
I-Monero ithathwa ngokuba ikwi-bullish trend njengoko i-downtrend ikholelwa ukuba iyanqanyulwa. Iinkunzi zeenkomo zaphula umgca we-downtrend kunye nexabiso livaliwe ngaphezulu kwayo. Oku kungqina ukupheliswa. Ukunyuka okuphezulu kunokuqinisekiswa ukuba iinkunzi zeenkomo ziligcinile ixabiso elingaphezulu kwee-EMA.
Ixabiso lokungena: $ 54
Yeka: $ 50
Ithagethi: $ 70
I-Monero (i-XMR) isinki ngokuthe ngcembe njengokuthengisa koxinzelelo oluqhubekayo
Ukuhlaziywa: 25 Disemba 2019
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 70, $ 80, $ 90
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 40, $ 30, $ 20
IXMR / iXabiso leXabiso leXesha elide leNdlela: Ukuthwala
UMonero usemarikeni yeebhere. Le ngqekembe ithengise ngaphezulu kwe- $ 45 yenkxaso ukusukela nge-25 kaNovemba. I-Monero iyawa kwaye yenza uthotho lwezinto eziphantsi nezisezantsi. Ngomhla kaNovemba 25, ingqekembe yathengiswa yaze yafikelela kumazantsi e- $ 45. Emva kokulungiswa okuphezulu, i-XMR ibuyele kumgangatho ofanayo. NgoDisemba ixabiso lidityaniswe ngaphezulu kwe- $ 45. Ikhefu elingaphantsi kwenqanaba lenkxaso kunokwenzeka xa uxinzelelo lokuthengisa luqala kwakhona. Ngokulindelekileyo, ingqekembe inokuwa kwaye ifikelele kwi-40 okanye kwi-34 yeedola ephantsi.
Ngomhla kaNovemba 27, ingqekembe ine-crossover ebhasiweyo; Iintsuku ezingama-21 ze-SMA zinqumla i-SMA yeentsuku ezingama-50 ezibonisa ukuba iMonero iyawa. I-SMA yeentsuku ezingama-21 isebenza ngokuchasene nengqekembe. I-XMR ithengisa ngaphantsi kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kuthetha ukuba ingqekembe ikwi-bearish umfutho. Nangona kunjalo, ukuba amabhanti aluhlaza kunye nobomvu awela ngaphantsi kwe-20% yoluhlu, imakethi iya kuba kwisantya esomeleleyo se-bearish. Oku kuya kubangela ukuba imali iqhubeke nokuhla kwexabiso.
I-XMR / USD I-bias yexesha eliphakathi: Ukutshintsha
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ingqekembe iyaguquguquka phakathi kwamanqanaba eedola ezingama-44 kunye nee-57.50 zamaRandi. Ekuqaleni, ingqekembe yehla yaya kuthi xhaxhe nge-46 yeedola yaza yahlawulwa kwakhona. Ukunyuka okuye kwachaswa kwaye amaxabiso abuyiswa kwakhona kwaye aqala kwakhona ukudityaniswa kwi-52.50 yeedola ephantsi. Emva kwexesha, iibhere zaphuka ngaphantsi kwe- $ 52.50 njengexabiso elichongiweyo kwinkxaso yangoku. Iibhere zavavanya inkxaso amatyeli amane kodwa azakwazi ukuyaphula.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zihamba ngokuthe tye zibonisa ukuba amaxabiso aqala ngoku. Isalathiso samandla esihlobo isihlandlo se-14 kwinqanaba lama-41 sibonisa ukuba iMonero ikwindawo ebopha uluhlu. I-Monero kulindeleke ukuba ithengise ngeli jelo lithe tyaba ilinde isiphumo sokuphuka okanye ukophuka. Ukuthengisa uxinzelelo ngakumbi kumgca wenkxaso. Ukwahlulwa okungezantsi kwenkxaso kuya kuqhubeka kunciphisa imali.
Intengiso ikwindlela esecaleni. Ngaphandle kokunyuka kwamaxabiso, iibhere zibonakala ngathi zinamandla. Ukuthengisa uxinzelelo kunokwenzeka ukuba kuqhubeke kwakhona ukuba umfutho we-bearish uqhubeka. Kwitshathi yemihla ngemihla, ukuba amaxabiso ayaphula ukuxhathisa kwaye avale ngaphezulu kwayo, kuya kubakho utshintsho kwimo. Abarhwebi ngoku banokuthenga ngexabiso langoku lokuphuma.
Monero (XMR) Umqondiso woRhwebo
Ixabiso lokungena: $ 40
Yeka: $ 30
I-Monero (i-XMR) ijongene nokuThengisa uxinzelelo emva koZamo lokuPhumla
Ukuhlaziywa: 1 Disemba 2019
Amanqanaba aphikisayo aphambili: $ 70, i-$ 80, i-$ 90
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 40, i-$ 30, i-$ 20
Ingqekembe yayithengise ngaphezulu kwe- $ 50 ngo-Okthobha kwindlela esecaleni. Ngo-Novemba, u-Monero wenza intshukumo elungileyo kwaye waqhekeza ngaphezulu kwenqanaba lamaxabiso angama-60. Iinkunzi zeenkomo azikwazanga ukugcina intshukumo ngaphezulu kwenqanaba lamaxabiso aphezulu njengoko ingqekembe yaphikiswa kwi $ 65. I-Monero yehla kwaye yaphula isezantsi kwi-50 yeedola ukuya kwi-47 yeedola entsha. Ingqekembe iyawa emva kokutsala ubuyise umva kwakhona kwizantsi elidlulileyo kwi- $ 50. Kukho imiqondiso yokuba ingqekembe iya kuwa njengoko imeko yangaphambili ibiphukile. Ukuba uxinzelelo lokuthengisa luyaqhubeka, ixabiso liya kufikelela kumgangatho ophantsi weedola ezingama-34 okanye ezingama-40.
Ukuhamba ezantsi kuye kwabonakaliswa ngothotho lwezinto eziphantsi kunye nezantsi. Ingqekembe ibuyise umgca wokumelana kwaye yaya ezantsi. Ixabiso lingawa kwaye lifikelele kumgangatho osezantsi womgca wenkxaso. IXMR iwile yafikelela kwinqanaba lama-42 lemihla ngemihla ye-RSI 14. Ikwabonisa ukuba ingqekembe iya kuwa njengoko ingaphantsi komgca osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini siyehla saya kuthi ga kwiidola ezingama-46 kwaye siqala ukunyuka phezulu. Ukunyuka okuphezulu kwakuhlala ixesha elifutshane njengoko ingqekembe yayichasene ne- $ 56. Ukuba ingqekembe iyaqhubeka nokuwa kwayo kwaye yaphuka ngaphantsi kweedola ezingama-46, ukuhla kuya kuqhubeka kwakhona.
Ingqekembe iwela kwinkxaso ye-EMA yeentsuku ezingama-26, ukuba yaphuka ngaphantsi kwayo, ingqekembe iya kuphinda iqhubeke nokuhla. Iibini ngoku zithengisa kwingingqi engaphezulu kwe-20% ye-stochastic yemihla ngemihla. Oku kubonisa ukuba imarike ikwisantya esomeleleyo se-bearish.
I-Monero ithengisa kwindawo ye-bearish ethambekele ekuweni. Nangona kunjalo, zonke izikhombisi zibonisa imiqondiso ye-bearish. Ingqekembe iyawa emva kokuvavanya umgca wokumelana, ukuba ingqekembe ibambe ngaphezulu kwenkxaso kwi-50 yeedola, uMonero uza kunyukela phezulu. Ngakolunye uhlangothi, ukuba ihla ngaphantsi kweedola ezingama-47, i-downtrend iya kuphinda iqale.
Isixhobo: DASH / USD
Ixabiso lokungena: $ 47